I-China Ioksijini kunye neNitrogen Ifektri yeProjekthi yezoNyango kunye nabaSebenzisi boSetyenziso abaenzi kunye nabathengisi | OKANYE
Iprojekthi yeOxygen kunye neNitrogen Factory yeProjekthi yoNyango kunye nokuSebenza
1: Isixhobo sokushicilela seRotary esizenzekelayo ngokupheleleyo.
2: Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi kakhulu.
3: Ukugcina amanzi njengesiguquli somoya kupholile.
I-4: I-100% yentsimbi yokwakha i-stainless steel ngokwe-ASME imigangatho
I-5: Ucoceko oluphezulu lwe-Oxygen yokusetyenziswa kwezonyango / esibhedlele.
Uhlobo lwe-6: Skid ekhwele (Akukho siseko siyafuneka)
I-7: Qalisa ngokukhawuleza kwaye ucime ixesha.
8: Ukuzalisa ioksijini kwisilinda ngempompo yeoksijini engamanzi
I-1: I-compressors yomoya ojikelezayo ophantsi.
2: Ukucocwa kweSkid kugqityiwe nazo zonke izinto.
3: I-Cryogenic Expander kunye netekhnoloji yokuNyusa.
I-4: Ikholamu yokulungisa ukusebenza ngokukuko kwe-BOSCHI ITALY enelungelo elilodwa lomenzi.
I-5: Inkqubo yokugcwalisa isilinda seoksijini nge-oyile yempompo yeoksijini engamanzi.
I-6: Inkqubo ye-nitrogen cylinder yokuzalisa nge-oyile engenampompo yeNitrogen. (Ukhetho)
Ubungakanani obuphakathi bezityalo zethu zeoksijini / zenitrojini ziyilelwe kwaye zenziwa ngetekhnoloji yokwahlula umoya yomoya ye-cryogenic, ethembeke njengeyona teknoloji isebenzayo kwizinga eliphezulu lokuvelisa igesi ngokucoceka okuphezulu. Sinobuchule bobunjineli obukumgangatho wehlabathi obusivumela ukuba sakhe iinkqubo zerhasi yemizi-mveliso ngokuhambelana nemigangatho eyamkelweyo yokuvelisa kunye nokuyila imigangatho. Oomatshini bethu bezityalo benziwe emva kokuthatha izinto ezahlukeneyo ezibandakanya inani leemveliso ezinobisi kunye nolwelo eziza kuveliswa, ukucaciswa kokucoceka, iimeko zemo engqongileyo kunye noxinzelelo olunqwenelekayo lokuhanjiswa.
Egqithileyo Utyalo lweeoksijini zeGesi yezoNyango kusetyenziswa isibhedlele sisebenzisa umatshini wokugcwalisa ioksijini
Okulandelayo: Ixabiso eliQinisekisiweyo loKhuphiswano I-China 50nm3 / Iyure ye-Psa ye-Psa yezoNyango / yezoNyango ye-Oxygen Generator
Psa Oxygen Generator Izixhobo
Psa Oxygen Umatshini
Ugesi Oxygen Utyalo lweZibhedlele lusebenzisa iMedi ...
Izinto eziluncedo zeMveliso 1.Ukufakwa ngokulula kunye nokugcina umbulelo kuyilo lweemodyuli kunye nolwakhiwo. Inkqubo ye-2.Fully automated yokusebenza elula nethembekileyo. 3.Ukufumaneka okuqinisekisiweyo kweegesi zorhwebo ezisulungekileyo. I-4 iqinisekisiwe ngokufumaneka kwemveliso kwinqanaba lolwelo ukuba ligcinwe ukuze lisetyenziswe ngalo lonke ixesha lolondolozo. Amandla 5.Low co ...